Kuthatha ixesha elingakanani ukujonga iZiphumo zoPhendlo lukaGoogle? | Martech Zone
NgoLwesine, Septemba 13, 2018 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Nanini na xa ndichaza inqanaba kubathengi bam, ndisebenzisa ukufana komdyarho wamaphenyane apho uGoogle elwandle kwaye bonke abakhuphisana nabo zizinye izikhephe. Ezinye izikhephe zinkulu kwaye zibhetele, ezinye zidala kwaye zihlala zibhadula. Okwangoku, ulwandle luyashukuma ngokunjalo… kunye neenkqwithela (utshintsho lwealgorithm), amaza (ukukhangela ukuthandwa kwezikrelemnqa kunye nemikhombe), kunye nokuqhubeka kokuthandwa komxholo wakho.
Kukho amaxesha apho ndinokuthi ndibone izikhewu ezisivumela ukuba singene ngaphakathi kwaye siqokelele ukubonakala kwenqanaba lokukhangelwa kwezinto eziphilayo, kodwa amaxesha ngamaxesha kufuna ixesha ukubona ukuba kwenzeka ntoni kwishishini lomthengi, loluphi uhlobo lomgudu abawenzayo abo bakhuphisana nabo, kunye nendlela igunya labo lokukhangela elichaphazeleke ngayo lutshintsho lwealgorithm kunye nemicimbi yezempilo kwindawo.
Ngokuka-Ahrefs, kuphela yi-5.7% yamaphepha amatsha afumana inqanaba kwiziphumo eziphezulu ze-10 kuGoogle kungaphelanga nonyaka.
Ngokuka-Ahrefs, yi-0.3% kuphela yamaphepha amatsha afumana inqanaba kwiziphumo eziphezulu ze-10 kuGoogle kungaphelanga nonyaka ngegama eliphambili elikhuphisanayo.
Ngokuka-Ahrefs, kuphela yi-22% yamaphepha akumgangatho ophezulu kwiziphumo ezili-10 kuGoogle ezapapashwa kungaphelanga unyaka.
Ngelixa oko kuvakala kudimaza, ngumlo ofanele ukulandela. Sihlala siqala abathengi bethu ngokuchonga amagama aphambili asekhaya kunye nawomsila omde apho kukho khona ukubonakala kokhangelo kunye namagama aphambili abonisa injongo ethile malunga nokuthenga. Sinako ukuhlalutya ukhuphiswano, sichonge apho iphepha labo likhuthazwa khona (libuyiselwe umva), ukuyila iphepha elingcono elinolwazi lwakutshanje kunye nemithombo yeendaba (imifanekiso kunye nevidiyo), emva koko senza umsebenzi omkhulu wokulukhuthaza. Logama indawo yethu yabathengi isempilweni ngokubhekisele kwii-Webmasters, sihlala sibabona bekwindawo ephezulu ye-10 kwiinyanga ezimbalwa.
Kwaye yile organic yethu umda. Amagama aphambili anomsila omde ajolise kwisihloko esiphambili emva koko ancede indawo ekumgangatho wokudibanisa amagama aphambili. Siyaqhubeka nokutyala imali ekuphuculeni iphepha langoku esele likwindawo yokongeza kunye namaphepha amatsha agubungela izihloko eziza kunceda. Ixesha elingaphezulu, siyababona abathengi bethu behambela phezulu kumagama aphambili okhuphiswano, bahlala belufumana ukhuphiswano kwisithuba sonyaka okanye emibini. Akululanga kwaye akubizi mali ininzi, kodwa imbuyekezo yotyalo-mali iyamangalisa.
Ukubeka njani ngokukhawuleza kuGoogle:
Qinisekisa yakho indawo iyakhawuleza, usebenzisa uthungelwano lokuhambisa umxholo, uxinzelelo lomfanekiso, ikhowudi yokucinezelwa, kunye ne-caching.
Qinisekisa yakho Indawo yenzelwe kakuhle, Ifundeka lula, kwaye iyaphendula kubukhulu obahlukeneyo bescreen.
Uphando lwasekhaya kunye nomsila omde amagama ezo zinokhuphiswano oluncinci kwaye kuya kuba lula ukuzibeka kuzo.
Phuhlisa umxholo Ikhethekile, inomdla, kwaye igqibile ngesihloko ozama ukukufumana.
Yongeza imizobo, iaudiyo, kunye nevidiyo Umxholo wokwenza iphepha linyanzelise ngakumbi.
Qinisekisa ukuba iphepha lakho linekhowudi efanelekileyo enezihloko ezifanelekileyo, iibar ezisecaleni kunye nokunye Izinto ze-HTML.
Qinisekisa ukuba iphepha lakho linayo isihloko esikhulu ezifanelekileyo kumagama aphambili owalandelayo.
Qinisekisa inkcazo yemeta iya kugcina ulwazi kwaye yenze iphepha lakho livele kwabanye kwiPhepha leZiphumo zeNjini yokukhangela (SERP).
Nyusa umxholo wakho kwiindawo ezinayo iqhagamshele ngasemva kwamanye amaphepha asezantsi kwizihloko ezifanayo.
Nyusa umxholo wakho ngaphakathi iiforam zeshishini kwaye nge-imeyile kunye nemidiya yoluntu. Unokuba unqwenela ukubhengeza.
Qhubeka uphucula Umxholo wakho ukuqhubeka phambili kukhuphiswano.
Ngombulelo, ii-algorithms zikaGoogle ziye zavela ngokukhawuleza kunokuba abacebisi be-blackhat zokukhangela izinto… ungamqeshi umntu othumela i-imeyile ekuxelela ukuba banokukufumana kwiphepha lokuqala. Okokuqala qaphela ukuba abanalo nofifi lokuba ngawaphi amagama aphambili ojolise kuwo, ukuze ubesele ubekwa kwinqanaba elinye kwiphepha elinophawu, ukuba loluphi ukhuphiswano lwakho, okanye uza kubonisa njani ngokufanelekileyo imbuyekezo kutyalo-mali. Rhoqo kunokuba kungenjalo, ezi nkonzo ziya kutshabalalisa amandla akho okubeka ixesha elide ngokwaphula imigaqo kaGoogle kunye nokwenza ukuba i-domain yakho ikhawuleze. Kwaye ukulungisa indawo ekohlwaywayo kunzima kakhulu kunokubeka eyona inkulu!
Indawo ephezulu ifuna ukwenziwa kwesiza, kubandakanya isantya sephepha, ukuphendula kubungakanani beescreen ezahlukeneyo, ubutyebi bomxholo, kunye nokukwazi kwelo phepha ukuba kwabelwane ngalo ngokulula kwaye kubhekiswe kwezinye iisayithi ezifanelekileyo. Yindibaniselwano yalo lonke uphawu lweendawo kunye nezingasebenziyo- ayisebenzi nje kuso nasiphi na isicwangciso esinye. Nantsi infographic epheleleyo, Kuthatha ixesha elingakanani ukuGcina kuGoogle?
Ngobubele be: IQela leWebhusayithi
tags: ahrefsAlgorithmukuxhuma umvaamagama aphambili okhuphiswanoInqanaba likagooglenjaniIxesha elingakananikwenziwa kanjaniIzinto ze-htmlyandisa inqanabaUhlobo lwegama elingundoqoamagama angumsila omdeinkcazo yemetaUhlobo lwezinto eziphilayouphando lwezinto eziphilayoisikhundlaudidiubeko lwealgorithmsimo sezintoSEOisantya sendawoiqela lewebhusayithiisihloko
I-Podcasting iyaqhubeka nokukhula ekuthandeni nakwindlela yokwenza imali